“Tsy hamela anareo ho kamboty Aho” Jao. 14:18
Nirin’i Kristy ny hahafantaran’ny mpianany fa tsy hamela azy ireo ho kamboty Izy. “Tsy hamela anareo ho kamboty Aho”, hoy ny nambarany. “Hankaty aminareo Aho. Vetivety foana dia tsy hahita Ahy intsony izao tontolo izao; fa hianareo no hahita Ahy ; satria velona Aho, dia ho velona koa hianareo” Jao. 14:18,19
Fanantenana sarobidy sy be voninahitra loatra ho an’ny fiainana mandrakizay! Na dia tsy teo intsony aza Izy, ny fifandraisan’ireo mpianatra taminy dia toy ny an’ny zanaka sy ny ray aman-dreniny. “Amin’izany andro izany”, hoy Izy, “dia ho fantatrareo fa Izaho ao amin’ny Raiko, ary hianareo ato Amiko, ary Izaho ao aminareo” Jao. 14:20; Nokatsahiny ny hanamarika ao an-tsain’ny mpianatra ny fahaizana manavaka izay an’izao tontolo izao sy izay an’i Kristy. Efa ho faty Izy, nefa tiany ny hahafantaran’izy ireo marina tokoa fa ho velona indray Izy. Ary na aorian’ny hiakarany ho any an-danitra aza, ka tsy hiaraka amin’izy ireo intsony Izy, dia amin’ny finoana kosa indray no hahafahany mahita sy mahafantatra Azy, ary Izy dia mbola hanana ilay fitiavany manokana azy ireo hatrany tahaka izay nanany fony Izy niaraka taminy (...)
Ny teny nampilazaina ny mpianatra dia tonga aty amintsika amin’ny alalan’ny tenin’izy ireo. Antsika koa ny Mpampahery tahaka ny naha-azy ireo Azy, amin’ny fotoana rehetra, ary na aiza na aiza, amin’ny zava-mahory rehetra sy amin’ny zavatra mampalahelo rehetra, rehefa toa maizina ny faravodi-lanitra ka mampatahotra ny hoavy, ary mahatsiaro tena ho tsy manan-kery sy irery isika. Amin’ireny indrindra no fotoana hanirahana ny Mpampahery hamaly ny vavaka natao tamin’ny finoana.
Tsy misy mpampionona tahaka an’i Kristy, izay sady tena malemy fanahy no tena marina. Manohina Azy ny fahatsapany ny fahalementsika.
Miteny amin’ny fo ny Fanahiny. Misy toe-javatra maro mety hampisaraka antsika amin’ny namantsika; ny elanelan-tany, ny ranomasimbe misam-boaravoara izay afaka manelanelana antsika sy izy ireo. Na atao hoe mbola mitoetra aza ilay fitiavana madion’izy ireo, dia tsy ho azony tanterahina kosa ny haneho izany amin’ny fanaovany amintsika izay zavatra azontsika raisina amim-pankasitrahana . Fa ts misy toe-javatra na inona na inona, na elanelan-tany, mety hampisaraka antsika amin’Ilay Mpampahery antsika avy any an-danitra. Na aiza na aiza misy antsika, na aiza na aiza mety halehantsika, eo mandrakariva Izy, dia Ilay nomena hisolo toerana an’i Kristy, mba hiasa eo amin’ny toerany. Eo amin’ny tanana ankavanantsika mandrakariva Izy, miteny teny malefaka sy feno fitiavana, amintsika mba hanampy, hanohana, hampitraka ary haneho fitiavana.
Ny hery miasa manginan’ny Fanahy Masina dia ny fiainan’i Kristy ao amin’ny fanahy. Izany Fanahy izany dia miasa ao anaty sy amin’ny alalan’ny olona tsirairay avy izay mandray an’i Kristy. Ireo izay mahafantatra ny fisian’izany Fanahy izany ao aminy dia haneho ny vokany-fitiavana, fifaliana, fiadanana, fahari-po, fahamoram-panahy, fahononam-po, finoana.